VACC1000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 1000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC1000
Viet An’s VACC1000 Purified water filtration system is one of the most advanced water filtration systems currently. This product uses mechanical valves manufactured according to American technology. Viet An directly imports and distributes it in Vietnam.
VACC1000 စက်ဟာ ခေတ်အမီဆုံး ရေစစ်ထုတ်စနစ်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အမေရိကန်ရဲ့ အဆို့တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Viet An ဒီစက်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးပါတယ်။
VACC1000 bottled water filtration line - withacapacity of 1,000L/hour and application of RO and Nano water filtration technology - the most advanced technology today will provide the customers with pure water, ensuring food and hygiene standards
Are you looking for machinery to resolve water quality issues? Are you looking for the best water filtration system to produce high-quality water bottles to compete with other competitors in bottled water industry? Our ACC1000 Purified water filtration system will beaperfect choice for you.
တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ RO နဲ့ Nano အပလီကေးရှင်းကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေကို သန့်စင်သော ရေ၊ အစားအသောက်ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ ရေရဲ့ အရည်အသွေးပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ရှာဖွေနေတာလား? အခြား ရေသန့်စက်ရုံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ အရည်အသွေးမြင့် ရေဘူးတွေ ထုတ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ရှာဖွေနေတာလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VACC1000 စက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါလိ်မ့်မယ်။
Please find incentive prices for all of our products here https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc. where you can find detailed information of Viet An’s customer-tailored products.
Viet An မှ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို သိရှိဖို့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
With its compact designed and high-quality components imported from America, England, Korea, Japan, Italy, this model offersahigh durability withashelf life of above 10 years. The products are specifically designed to be used in households, apartments, factories, bottled water manufacturers and traders.
အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ အီတလီတို့မှ တင်ပို့တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် စက်အစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ထားသိုနိုင်ပါတယ်။ အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံး၊ စက်ရုံသုံး၊ ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ ရောင်းဝယ်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ သင့်တော်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
With this 6,900USD, you can own an ACC1000 Purified water filtration system using mechanical valves with an hourly capacity of 1,000L/h With this competitive price, you can recover your capital after just 1-2 years.
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉၀၀ နဲ့ တစ်နာရီမှာ ၁၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး စက်သုံးအဆို့တွေ အသုံးပြုထားတဲ့ ACC1000 ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ ဒီလိုသက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းကြောင့် ၁ နှစ် ၂ နှစ်အတွင်း ငွေအရင်း ကြေနိုင်ပါတယ်။
Currently, RO and Nanoe technologies are the two most common water filtration technologies. The pros and cons of each technology vary, depending on the water sources.
ယခုအခါမှာ RO နဲ့ Nanoe က အသုံးအများဆုံး နည်းပညာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ရေအရင်းအမြစ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
Viet An is now supplying manufacturing lines using both techniques. However, with our long-term experience in this industry, we can say that the water filtration system using RO technology is the most chosen by the customers.
Viet An မှ ဒီနည်းပညာနှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုနေတဲ့ လိုင်းတွေကို ပေးသွင်းပေးနေပါတယ်။ ဒီစက်ရုံလုပ်ငန်းကို နှစ်ရှည်လုပ်ဆောင်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဝယ်ယူသူတွေက RO နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စက်တွေကို ပိုပြီးရွေးချယ်ကြကြောင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
With this technology, the finished products after being filtered will be completely pure without any impurities, bacteria remained.
ဒီနည်းပညာနဲ့ဆိုရင် စစ်ထုတ်ပြီးသားရေတွေက အညစ်အကြေးတွေမရှိဘဲ သန့်စင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေတော့ ကျန်ရှိနေပါတယ်။
First, the intake water will be directly pumped in to the fist composite tank to remove the impurities with the sizes of ?5micrometers.
ပထမဦးစွာ ရေတွေကို ၅ မိုက်ခရို မီတာအရွယ်အစားနဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ဖယ်ထုတ်ဖို့ ပထမစုပေါင်းတိုင်ကီထဲ စုပ်တင်ပါမယ်။
After that, the water is pumped into the second composite tank which includes activated carbon for detoxification, decontamination, and deodorizing.
အဲ့ဒီ့နောက် အဆိပ်အတောက်၊ ရောဂါပိုးမွှား၊ အနံ့အသက်တွေ ဖယ်ရှားပေးတဲ့ ကာဗွန်ပါတဲ့ ဒုတိယ စုပေါင်းတိုင်ကီထဲကို စုပ်တင်ပါမယ်။
The water then comes into the third composite tank for limestone removal and water softener. Next, it comes to the safe filtration system and Be pumped to the RO membrane system withabooster pump system.
ထုံးကျေက်တွေဖယ်ပြီး ရေကိုပျော့အောင်လုပ်ဖို့ တတိယစုပေါင်းတိုင်ကီထဲကို သွားပါမယ်။ ပြီးတော့ လုံခြုံတဲ့ ရေစစ်ကိရိယာစနစ်ဆီကိုသွားပြီး အားပြင်းရေစုပ်စနစ်နဲ့ RO အလွှာပါးစနစ်ထဲကို စုပ်တင်ပါမယ်။
The RO membrane system hasafilter slot size of 0,0001 micrometers, which is even tinier thanabacteria’s size. Thanks to this, all the remaining toxins and impurities in the previous stages will be kept here and transferred out through the sewage line. The pure water then will come through the RO membrane to the second bactericidal system and bacteria filter to ensure food and hygiene standards before it is sent to the pure water tank.
RO အလွှာပါးစနစ်မှာ ဘက်တီးရီးယားထက် သေးငယ်တဲ့ ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားရှိတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာမြောင်းရှိပါတယ်။ ဒီဟာက နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက်တွေကို သိမ်းထားပြီး အညစ်အကြေးစွန့်ထုတ်လိုင်းကနေ စွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် သန့်စင်တဲ့ရေက ရေသန့်တိုင်ကီထဲ မရောက်ခင် လုံခြုံစိတ်ချရဖို့ ဒုတိယဘက်တီးရီးယားစနစ်ဖြစ်တဲ့ RO အလွှာပါးကို ဖြတ်ရပါတယ်။
Finally, the pure water sill be filled into the bottles. To haveaclosed and high-quality pure water production process, you can choose to invest additional filling systems such as automatic or semi-automatic bottle filling machines, membrane shrinking machines, expiry date printing machines.
နောက်ဆုံးမှာတော့ သန့်စင်တဲ့ရေကို ဘူးတွေထဲ ဖြည့်ရပါမယ်။ ပိုပြီးတော့ အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အော်တို၊ တဝက်အော်တို လောင်းဖြည့်စက်၊ အလွှာပါးရှုံ့စက်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် ပရင့်ထုတ်သောစက်များလည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
A smart control panel is mounted onto the machinery to display all important technical information such as operational status, processed water amount. More especially, the machine is designed to automatically stop in unexpected incidents, which increase the shelf life of the machine.
သင့်တော်တဲ့ အခြေအနေတွေ၊ စနစ်ကျတဲ့ ရေပမာဏတွေလို အရေးကြီးတဲ့ နည်းပညာ အချက်အလက်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စက်မှာ ထိန်းချုပ်ဘောင် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြသနာတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လျှင် အော်တိုရပ်သွားသော ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
There isagauge to display conductivity or total dissolved solids (TDS) of the pure water along withaLCD screen to notice the customers about maintenance or replacement time, This is alsoakey advantage that the model brings.
ဝယ်ယူသူတွေမှ ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ အစားထိုးမှုကို သတိပြုမိအောင် LCD စခရင်ပေါ်မှာ ရေသန့်မှာ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ရေတွေကိုပြဖို့ တိုင်းတာကိရိယာ ပါရှိပါတယ်။
This model is designed with an automatic circuit breaker system to supply or stop supplying water depending on the water amount in the tanks. This helps to protect the whole line when the power isaweak or sudden surge.
ဒီစက်ကို တိုင်ကီတွေမှာရှိတဲ့ ရေပမာဏကိုမူတည်ပြီး ရေပေးပို့မှု ရပ်တန့်မှုတွေလုပ်ဖို့ အော်တိုဆားကစ် ဘရိတ်ကာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါက ပါဝါ ရုတ်တရက် ဆောင့်တက် နိမ့်ကျဖြစ်တဲ့အခါ လိုင်းတစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
This is the most advanced water filtration product in the market currently. It offersalong-term shelf life of above 10 years.
ဒါက ဈေးကွက်မှာ ခေတ်အမီဆုံး ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ၁၀ နှစ်ကျော်တဲ့အထိ ထားသိုနိုင်ပါတယ်။
For more information about our products, call us at 0949 414141. Thank you!
ပိုမိုသိရှိရန် ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
What is the price of 100L water filtration system?
၁၀၀၀ လီတာ ရေစစ်ထုတ်စနစ်က ဘယ်လောက်လဲ?
bottled water filtration line?
Where to buy the water filtration system in Hanoi?
ဟနွိုင်းမှာဆိုရင် ဘယ်မှာ ဝယ်ယူနိုင်မလဲ?
Once you have decided to choose this VACC1000 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
Hỏi đáp & đánh giá VACC 1000 1000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်